भयावह बन्यो कोरोना आज एकै दिन देखिए यति धेरै नयाँ कोरोना संक्रमीत ! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/भयावह बन्यो कोरोना आज एकै दिन देखिए यति धेरै नयाँ कोरोना संक्रमीत !
काठमाडौं– पछिल्लो २४ घन्टामा नेपालमा थप ३ हजार ७ सय ९० जनामा को’रोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । २४ घन्टामा देशका विभिन्न प्रयोग शालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा ३ हजार ७ सय ९० जनामा को’रोना भा’इरसको सं’क्रमण पोजे टिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका हुन्।
आफै आँखीभौँ छेड्दा बेलुनजस्तै फुल्यो किशोरीको अनुहार, एक हप्ताभित्रै मृ’त्यु